Ny Apple Watch sy ny tombokavatsa | Avy amin'ny mac aho
Ary tsy Izahay dia tsy miresaka momba ny tatoazy kely izay anaovanao eo am-pelatananaoMiresaka momba ny fanaovana an'io ampahany manokana amin'ny vatantsika amin'ny tatoazy io isika. Toa ireo fitsapana isan-karazany izay tanterahina miaraka amin'ny famantaranandro Apple an'ny mpampiasa izay efa manana izany eo am-pelatanany, dia manazava fa ny tombokavatsa ao amin'io faritra io dia manakana ny famakiana marina ireo sakan'ny famantaranandro. Ny tahirin-kevitra asehon'ny fitaovana ao amin'ny faritra ananantsika tombokavatsa dia mety diso na koa manakana ny Watch miaraka amin'ny kaody napetrak'ilay mpampiasa teo aloha, izany hoe, tsikaritr'ireo sensor ireo fa tsy mifandray amin'ny hoditra izy ireo ary izany no mahatonga ny ny kaody fiarovana napetraky ny mpampiasa dia ampidirina.
Ny tena marina dia mitranga izany rehetra izany raha vantany vao apetrakao amin'ny famantaranandro amin'ny famantaranandro ny famantaranandro, dia tsy misy ifandraisany amin'ny loko amin'ny hoditra na ireo olana amin'ireo sensor amin'ny fitaovana. Ireo sensor izay ampidirin'ny Apple watch mamoaka hazavana infrared mankany amin'ny hodintsika (maintso), haverina amin'ny famantaranandro ity hazavana ity mba hahazoana ny angon-drakitra ary rehefa manana tombokavatsa isika, ny ranomainty dia lasa karazana «écran» izay mahatonga ny fandrefesana ho diso na ho foana mihitsy aza.
Tamin'ny voalohany dia tsy naneho hevitra momba ny olan'ny tombokavatsa sy ny tsy fitovizan'ity karazana sensor ity i Apple, fa milaza ao amin'ny tranonkalany kosa fa amin'ny tranga sasany dia mety tsy ho vita ny fandrefesana ny pulsa fa tsy mamaritra na inona na inona momba ny tatoazy. Ny olana dia toa miharihary amin'ity lafiny ity raha mijery ohatra amin'ny fitsapana ataontsika isika iMore mivantana amin'ny hoditra misy tombokavatsa ary toa tsy mahomby ny Watch, toy ny amin'ny Reddit sy ny toeram-pivarotana hafa. Ity karazan-doko fo ity dia ampiasaina amin'ny famantaranandro sy bracelet hafa koa ny valiny dia toa mitovy amin'ireo tranga ireo, tsy mahomby ny sensor.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Mitandrema raha manana tatoazy amin'ny tananao ianao ary te hividy Apple Watch